अनलाइन प्रेम – मझेरी डट कम
घडीको सुई भित्तामा कहिले चढ्दै त कहिले ओर्लदै थियो । शुन्यतामा टिक् टिक् आवाज काफी थियो मुटुको धड्कन अझ तेज बनाउन । यस्तै ९ बजेको हुदोँ हो । एक्लै धुम्धुम्ती कोठामा बसिरहेकी मलाई नजिकैको स्योकेशमा राखिएको किताबका खातहरूले टोकुँला झैँ हेर्दै थियो । सुरज गएदेखि मेरो एकान्तको साथी बनेका ती किताबहरूलाई खै किन हो आज पल्टाउनै मन भएन । किन किन मन फुङ् उडेको मरुभूमि जस्तै हुदैंथियो ।
यस्तो त मलाई कुनै अपशकुन हुनु अगाडि हुने गर्दथ्यो । म निद्रादेवीको काखमा लुट्पुटिन आतुर थिएँ । तर आज निद्रादेवीले त्यति छिट्टै बोलाउलिन् जस्तो कुनै छाँटकाँट नै देखिन । आँखा उध्रेका बोरा झैँ खुल्लै रहिरहेथ्यो जति च्यापे पनि । अलि पर हेरें टेबलमा ल्यापटपले मलाई जिस्काईरहेको थियो ।
म जुरुक्क उठें । ल्यापटप सुम्सुम्याएँ । कता कता सुरजलाई नै सुसुम्याउँदै छु जस्तो भान भो । यही त सुरजले अष्ट्रेलिया जानुआघि “सानी म गएपछि एकान्तलाई टाढा गर्ने साथी यही हो ।”भनेर उपहार दिएको थियो । साँच्चै यही त हो मेरो बेचैन मनलाई केही छिन भए पनि राहत दिलाउने । वाईफाई कनेक्सन गर्‍यो । नेटवर्कको बिभिन्न साईट हेर्‍यो । मन भुलायो । मैले ल्यापटप खोले । मुसुक्क हाँस्यो ल्यापटप मानौ ऊ मेरो निकै पुरानो साथी हो र भर्खरै भेट बहेको थियो । म पनि बन्द ओठबाट अलिकति हाँसेँ ।
याहु, स्काईप, फेसबुक, मझेरी या अन्य कुनै? कुन खोलौं मन घुम्यो । मेरो रोजाईका साईटहरू थुप्रै छन् तथापि म प्राय फेसबुक र याहु खोल्न मनपराउँछु । हातहरू स्वत फेसबुक खोल्नतिर अगि बढ्यो । साईन ईन गरेँ । राता राता नम्बरहरू म्यासेज बक्स, फ्रेन्डरिक्वेस्ट र नोटिफिकेशनमाथि नाचिरहेको थियो । पहिलो प्राथमिकता म्यासेज बक्सलाई लौ जा त । बिजुलीको झट्का झैँ म्यासेज बक्समा किल्क गरेँ । खासै त्यस्तो म्यासेज देखिन । अब पालो नोटिफिकेसनको । साथीहरूले आफ्ना रचनामा मलाई टाँग्न भ्याउनुभएको रहेछ । हातहरू युनिकोड टाईप गर्न हतारिए । विस्तारै विस्तारै साथीहरूको प्रतिकृया बक्स भर्न थालें ।
मन यसै भुल्न थाल्यो । मौनता भने कायमै । जरै गाडेर बसेको । मेरा आँखाहरू कहिले साथीहरूको स्टाटसमा त कहिले नव सृजनाहरूमा गएर टाँसिन्थें । मन परिहालेमा लाईक बटम थिचिहाल्थें । यसो आँखा घुमाउँदै थिएँ कि म्यासेज बक्समा गएर टक्क आडियो । म्यासेज बक्समा म्यासेज तरलङ्गं झुण्डिएको रहेछ । म प्राय च्याटमा बस्न रुचाउँदिन । त्यसैले केही भन्न मन लाग्यो भने मलाई साथीहरूले म्यासेज नै गर्नु हुन्थ्यो । हतार हतार म्यासेज हेरें ।
“स्वीटी याहुमा आऊ न ।” यस्तो लेखिएको रहेछ ।
पठाउनेको नाम हेरें । पठाउने उही मेरी प्यारी सखा रेबिना थिइन् । झण्डै दुई महिना भएको थियो होला उनी नेटवर्कको दुनियाँबाट हराएकी । त्योभन्दा अगाडि हाम्रो भेट अनलाइनमा प्राय जसो दैनिक हुने गर्थ्यो । उसले खोलीकी ‘मुस्कान’ ग्रुप निकै चलेको ग्रुपहरू मध्यमा एउटा पर्दथ्यो । हामी बेलुकाको समयमा प्राय यही ग्रुपमा च्याटमा मस्त हुन्थ्यौं । उनी निकै मजाकिया कुराहरू गर्थिन् । धेरै फ्यानहरू थिए । त्यसरी ग्रुप च्याटमा बस्दा समय बितेको पत्तै हुन्नथ्यो । साह्रै खुसी देख्न्थिन् । उनको फ्रेण्डलिस्टमा फ्रेन्डमात्रै झण्डै पाँचहजार पुग्न लागिसकेको थियो । प्रोफाईल पिक्चरहरू असाध्यै राम्रा हुन्थे । उनको तस्वीरमा लाईक गर्ने मात्रै सय दुई सय हुने अनि प्रतिकृया त कति हो कति । सबैसँग खुलस्त भएर बोल्न रुचाउने भएकीले होला सबैको प्यारी थिइन् । खुला हृदयकी धनी मेरी सखालाई म मिस गर्दै थिएँ । खल्लो अनुभव गर्दैथिएँ । आज टुप्लुक्क अनलाइनमा भेट्दा मन फुरुङ्ग भयो । मैले पनि “ओके डियर”भनेर रिप्लाई गरेँ ।
हतार हतार याहु साईन इन् गरेँ । उनी अघिदेखि अनलाईमै रहिछिन् ।”सरी ।” भनें “इट्स ओके स्वीटी”उनले रिप्लाई गरिन् । उनले भ्वाईस कल गरिन् । मैले रिसिभ गरेँ ।
“स्वीटी कस्तो हेर्न मन छ प्लीज क्याम देऊ न ।” रेविकाको अनुरोध थियो ।
मैले ठट्टा गर्ने मनसायले “किन हो बिर्सिसक्यौ र मलाई? “भनें ।
तर उनी गम्भिर मुद्रामा पो पाएँ । स्वर कता कता भासिए जस्तो लाग्यो । मैले क्याम दिएँ । अनि भनें, “म चाँहि तिमीलाई नहेरुँ?”
फिस्स हाँसेँ जस्तै आवाज कानमा ठोक्कियो ।
क्याम खुल्यो । साँच्चै उनी हाँस्ने असफल प्रयास गर्दैथिइन् । ओहो! म जिल परें । म कोसित बोल्दै थिएँ? आफैलाई शंका लाग्यो । रेबिका त हैनन् । ए हैन रहेछ उनी त रेबिका नै पो थिइन् त । म पनि फिस्स हाँसेँ उनलाई हेरेर । कस्तरी झाँटिएकी? एकछिन अल्मलिएँ । गालाका हड्डीहरू बढेका थिए । आँखा खोपिल्टाभित्र पसेका । नाक सगरमाथा झैँ ठडिएको । कपाल उस्तै रहेछ । अगाडि निलम कट पछाडि काँध काँध झरेको सगरमाथाको आधार-शिविरबाट झरे जस्तै । हाँस्दा दाँतहरूमात्रै सेता देखिने ।
“हैन कता हराएकी आजभोलि?”
मेरो प्रश्न सोझैँ तेर्सियो ।
प्रतिउत्तरमा साविकमा झैँ “अलि बिजी थिएँ स्वीटी डकुमेन्टस बनाउन धाएको धायै छु ।” पाएँ ।
उनी पछिल्लो २ वर्षदेखि युकेमा स्टुडेण्टस भिसामा पढ्दै थिइन् । अझैँ भिसा थपेर करियर डेभलोप गरेर मात्रै फर्किने सुरमा थिइन् ।
“ए अझैँ मिलेको छैन?”
“उफ् मिल्ला जस्तो छैन ।” स्वर भासिएको थियो ।
म मौन थिएँ । उनी मसँग हाँस्ने असफल प्रयास गर्दैथिइन् ।
तर मेरो नजरबाट त्यो लुक्न सकेन । सोधें, “केही लुकाउँदैछौ? के भो? किन यस्तरी दुब्लाएकी?”
सन्नाटा छायो । एकछिनमा मेरा कानाहरू चिसा भयो । उनी जे भन्दै थिइन् त्यसमाथि म सजिलै विश्वास गरिहाल्ने स्थितिमा थिइन ।
“स्वीटी मेरो राजसँग ब्रेक अप भयो ।”
उफ्! सायद यही सुन्नलाई होला आज मलाई निद्रा परेकै थिएन । एकछिन म ट्वाल्ल परें । उनी मसँग बारम्बार भन्ने गर्थिन राजको बारेमा अनलाइनमा भेट्दा । भन्थिन् “हामी केही वर्ष पछि बिहे गर्छौ । ऊ मेरो धेरै केयर गर्छ । मलाई के मन पर्छ, कस्तो कपडा, कस्तो खाना मन पराउँछु सबै थाहा छ राजलाई ।”
घर छाडेर यु. के. गएपछि राजलाई उनले अनलाइनमै भेटेकी थिइन् । उसले भने अनुसार राज अष्ट्रेलिया गएको तीन वर्ष भएछ । उनीहरू घण्टौं च्याटमा बिताउने गर्दथे । कुनै दिन अनलाइनमा नभेटदा दुबैलाई छटपटी चल्थ्यो । फेसबुकमै चिनेको राजले भन्ने गर्थ्यो रे “रेबिका तिमी नहुदोँ हो त म अनलाइनमा पनि बस्ने थिइन ।”
आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू सबै मसँग सेयर गर्थिन् रेबिका आखिर बाल्यकालदेखिकै साथी जो थियौं हामी ।
दु:ख होस या खुसी मसँग सेयर नगरी मनले नमान्ने रे उनलाई ।
कति हँसिली देखिन्थिन् । राज र रेबिकाबिचको मायाको झाङ फैलदैं थियो । उनी राजप्रति यति विश्वस्त थिइन कि एकदिन मैले रेबिकालाई अनलाइनमा देखेर “हाई डियर” भन्दा “म रेबिका हैन सरी ल म त राज हुँ ।” भन्ने रिप्लाई आयो ।
मैले हत्तपत्त च्याट क्लोज गरेँ । पछि थाहा पाएँ रेबिकाको फेसबुक राजले चलाएको रहेछ । उसलाई रेविकाको आई डी र पासवर्ड दुबै थाहा रहेछ । रेबिकाले नै दिएकी रे । राज बेलाबेलामा त्यसरी रेबिकाको आई डी चलाउँदो रहेछ ।
मैले “डियर यति धेरै विश्वास गर्नु पनि ठिक हैन आफ्नो सेक्रेट नै बताउनु त ।”
हाँस्दै उनले त्यतिबेला मलाई “स्वीटी आत्तिनु पर्दैन । ऊ त्यस्तो छैन म राजलाई राम्रोसँग चिन्छु ।”
यति धेरै विश्वास अनलाइन भेटिएको प्रेमीमाथि । म दङ्ग परेकी थिएँ र आफ्नो मनलाई उन सक्छ उनीहरूबिच धेरै प्रगाढ माया भएर होला यो हदसम्म गएको भनेर सान्त्वना दिएकी थिएँ ।
त्यसपछिका दिनहरूमा रेबिकाले नबोलाएसम्म मैले कन्भर्सेसन गरिन । जतिपटक हामी बीच च्याट हुन्थ्यो त्यतिपटक उनी राजको कुरा गर्न छुटाउँदिनथिन् ।
एकपटक भिडियोकलमा “स्वीटी हेर त यो ड्रेस कस्तो छ? राजले आज मातृ कुरियो गरेर पठाएको ।” हल्का निलो रङ्गको वान पिसमा उनी सुन्दर देखिन्थिन् । मैले नियालेर हेरेको थिएँ । गलामा सेतासेता मोतिका दाना झैँ देखिने मालाको गोलो घुमाउरो बुट्टा थियो ।
मैले “वाउ ईट्स सो ब्युटीफुल डियर ।” भनें ।
उनी पनि दङ्ग थिइन त्यसदिन ।
भन्दै थिइन् “मैले पनि १ हप्ता अगाडि राजलाई आई फोन पठाएकी थिएँ ।”
यसो भनिरहदाँ उनी निकै प्रफुल्लित मुद्रामा देखिन्थिन् ।
यस्तै यस्तै चल्दैथ्यो । त्यसपछिका दिनहरू पनि खुसीसाथ बित्दै थियो । झण्डै २ महिना भएको थियो । मैले उनलाई नसम्झेको त हैन तर उनी अनलाइनमा देखिन छोडेकी थिइन् ।
सोचें सायद ब्यस्त होलिन् । भन्दैथिइन “स्वीटी अब पढाई सकियो । अब हार्ड वर्क गर्छु । बैङ्क ब्यालेन्स जो बनाउनु छ । यतिका वर्ष यही बसियो । अलिकति भए पनि पैसा त घरतिर पनि पठाउनुछ ।
उनले त्यसपछि कहिले नाईट कहिले डे सिफ्टमा काम गर्न थालेकी थिइन् । मासिक डेढ लाखसम्म हुन्छ भनेकी थिइन् । सायद काममा निकै ब्यस्त भइन् ।
एकदिन मलाई वेभक्याममा हेर्दै भनेकी थिइन “स्वीटी तिम्रो कपाल कस्तो ड्राई देखिएको । म यहाँबाट स्याम्पु र कन्डिसनर कुरियो गर्छु । यहाँको प्रोडक्ट्को क्वालिटी राम्रो हुन्छ ।”
मैले मैले मुसुमुसु हाँसेर “भैगो अहिले हैन । कुरियो गर्दा महङ्गो पर्छ । तिमी आउँदा नै ल्याऊ न ।”भन्दा उनी खुलेर हाँसेकी थिइन् । दिलदार हाँसो । मैले जीवनमा सायदै देखिकी थिएँ उनको मुहारमा काला बादलका धर्साहरू । मानौ उनी हाँस्न कै लागि जन्मिएकी हुन् । पुक्क परेको गाला, हल्का निलो थियो त्यो चिम्सा आँखाको रङ्ग । ओठमा हरदम मुस्कान झुण्डिरहने झर्नै नमान्ने । लाग्थ्यो दन्त्यकथाको राजकुमारी यस्तै हुँदिहुन् ।
तर तर उफ् ! टाउको भाउन्न हुन थाल्यो । कपालको जरा जरा दुख्न थाल्यो । कन्ञ्चट कट्कट् खान थाल्यो । घडीको टिक् टिकले फेरि शुन्यता चिर्न थाल्यो । भावशुन्य भै ल्यापटमा म मेरी सखालाई एकहोरो हेर्दै थिएँ । मेरी सखा कस्ती थिइन् । सूर्यमुखी फूलजस्ती । तर त्यो टेक्नोलोजीले दिएको अनुपम उपहार सानो ल्यापट भन्ने बक्सभित्र मेरी सखी सिचाँई बिनाको ओईलेको बिरुवा झैँ लत्र्याक्क परेकी थिइन् । उनी अब म बाट कुनै पीडा लुकाउन नसक्ने स्थितिमा पुगेकी थिइन् । विस्तारै उनको आवाज भक्भकिन थाल्यो भर्सिन लागेको भातको सुक्न लागेको पानि जस्तै भक्भक् । नजिकै भए अंगालोमा भरेर “नरोऊ म छु ।” भन्न मन लाग्यो । एकछिनमा उनी टेबलमाथि घोप्टिईन् । सुँक्क सुँक्क आवाज एकहोरो मेरो कानमा माहुरीको भुन् भुन् जसरी । उनको चम्किलो केश लाईटले झनै टलक्क टल्किएको थियो ।
केही बेर पछि दुई हातले आँखाको चेपचेपबाट बगेको आँशु पुछिन् अनि फेरि फिसिक्क हाँसिन् । र भनिन् “स्वीटी मन हलुङ्गो भयो ।”
म पनि उनीसँगै एकमुठी हाँसेँ ।
बोल्न खोजें । आवाज म्युट थियो । बल्ल बल्ल भोलुम बढाएँ, “कसरी यस्तो भयो?”
खै कसरी भनुँ । राज विवाहित रहेछ । एउटा छोरा पनि छ रे । मैले थाहा पाएँ । अनि सोध्दा ऊ मसँग झर्किएर ‘तिमी मलाई विश्वास गर्छौ कि अरुको? यसरी ममाथि अहिलेनै अविश्वास गर्नेसँग मेरो जीवन कसरी निर्वाह हुन्छ”भन्यो रे । रेबिका केही बोल्न खोज्दैथिइन् रे राज अफलाइन भैहाल्यो रे ।
त्यसपछिका दिनहरूमा राजलाई अनलाइनमा भेटिन रेबिकाले । कहिलेकाहीँ आक्कल झुक्कल देखिहाले पनि रेबिकाले बोलाउँदा पनि नबोली अरु नै केटीहरूसँग च्याटमा ब्यस्त ।
उसको यस्तो अविश्वासनीय ब्यबहारले रेबिका मर्महात भैइन् । एक छोराको बाबुले आफू अविवाहित हुँ भनेर प्रेम प्रस्ताव राख्दा त्यसभन्दा अगाडि आएका थुप्रै प्रपोजहरूलाई लत्याएर स्वीकृति दिएकी थिइन् रेबिकाले । भन्ने गर्थिन् “स्वीटी मेरो म्यासेज बक्समा लभ प्रपोजका म्यसेजले टन्नै भरिएको छ । ह्याङ्ग होला भन्ने टेन्सन् । हि हि ।”
उनी मस्त हाँस्थिन् । हुन पनि किन नाओस । राम्री उस्तै त्यसमाथि थुप्रै प्रोफाईल पिक्चर राख्थिन् । घरपरिवारसँग बिछोडिएर गएदेखि न्यास्रो मेट्न फेसबुकको प्रयोग गर्न फ्रेण्डलिस्टमा झण्डै पाँचहजार त फ्रेण्ड पुग्न लागिसकेको थियो ।
सयौं प्रस्तावहरूलाई पछाडि राखेर राजलाई विश्वास गर्न थालेकी रेबिकालाई मैले सम्झाउने प्रयास नगरेको पनि त हैन । एकदिन मैले भनेकी थिएँ “डियर यस्तो अनलाइनमा भेटेको मान्छेको के भर? यति धेरै गहिरेर पनि नजाऊ है ।”
“हुन त हो स्वीटी । तर राज तीमध्ये हैन । म पनि पहिले यसै भन्ने गर्थें । समय बिताउन मात्रै हो जस्तो लाग्थ्यो यी सब । राज जस्ता हजारौं भेटिन्छन् । तर पनि खै किन हो मनलाई सम्हाल्न सकिन ।” यसरी मैले सम्झाउँदा पनि नमानेर एकहोरो विश्वासमा प्रेम बर्षाइरही उनले ।
आज उनै प्रिय रेबिकाको मुटु क्षतबिक्षत भएको थियो ।
मसँग बोल्ने शब्दहरूको अभाव भयो । मात्रै यति भनें “डियर अनलाइन प्रेममा यस्तो हुन्छ । छोडिदेऊ । धेरै गहिरेर पनि नजाऊ ।”
तर सायद उनी धेरै टाढा पुगिसकेकी थिइन् । भनिन् “राज एक छोराको बाबु हो भन्ने जानेपछि पनि किन यो मन मान्दैन उसँग टाढा हुन?दिमागको कुना कुनामा राजसँगको याद खोपिएको छ । सायद म राजलाई आज पनि उत्तिक्कै माया गर्छु । कुनै खेल खेलिरहेकी छुईन जहाँ जित्नु पर्छ नै भन्ने छैन ।”
म उनको यस्तो प्रतिकृया सुनेर स्तब्ध भएँ । त्यसो भए के त? रेबिका प्रेममा पक्का डुबिसकिन् त?
म भावशुन्य भएँ । कुनै दिन “स्वीटी यो अनलाइनमा हुने गफगाफ मात्रै टाईमपास हो । यसले मलाई एक छेउ पनि छुदैंन ।” भन्ने गर्थिन् । तर आज ख्याल ख्यालमै उनी कसैप्रति प्रेमप्रति आश्क्त भैसकेकी थिइन् ।
न रङ, न रुप, न परिवेश, न भविष्य हेर्छ यो प्रेमले । सच्चा मनले प्रेम गरेको छ भने त्यति सजिलै बिर्सन सकिँदैन भन्छन् । साँच्चै नै उनी पनि उस्तै हालतमा थिइन् । राजसँगको बिछोड पछि पनि उस्तै माय गर्दैथिन् । अविरल अनवरत । च्याटमा बोलाउँदा राज नबोल्दा उनको मुटु छिया छिया हुन्थ्यो । पल पल मर्थिन् । मन यसै मरिसकेको र बाँकी रहेको त्यो तन पनि सुकेर खङ्ग्रङ्ग परेको रुख जस्तै । यस्तो लाग्यो मानौ कुनै खेतको बीचमा कपडा बेरेर गाडिएको बुख्याचा हो ।
कस्तो माया हो यो? जस्ले एउटा सुन्दर बस्ती उजाड परिदिन्छ, जस्ले मगमगाउँदो फूलबारीलाई उजाड उजाड मरुभूमिमा परिणत गरिदिन्छ । उफ् ! यस्तो पनि माया ।
म यस्तै तरङ्गमा तैरिदैँथें ।
“स्वीटी मेरो ड्युटीको टाईम भयो । नेक्स्ट टाईम भेटुलाँ ल ।” कानमा रेबिकाको मधुर आवज गुञ्जियो । म झस्याङ्ग भएँ ।
“हुन्छ डियर पिर नगर ल । आफ्नो केयर गर । सुख दु:ख यस्तै हो । आउँछ जान्छ । कहिल्यै समाप्त हुन्न । के थाहा तिम्रो राजकुमार राजभन्दा पनि बढी माया गर्ने अरु नै कोही पो छ कि? ओके बाई, सि यु, टेक केयर ।” मेरो मुखबाट ह्वार्ह्वर्ती निस्किएका यी शब्दहरू सुन्ने कोही थिएन । रेबिकाले अघि कल काटिसकेकी थिइन् । म त अघिदेखि एक्लै पो फतफताउँदै रहेछु ।
लाज पनि लाग्यो आफैदेखि एकछिन त । टाउको जुरुक्क उठाएर वरिपरि हेरें । भित्ता मलाई हेर्दै जिस्काउँदैथ्यो । चुपचाप ल्यापटप बन्द गरेँ । अनि ओछ्यानमा डङ्ग्रङ पल्टिएँ । आँखा चिम्म गरेर सुरजलाई सम्झिएँ । ऊ गएको पनि तीन वर्ष भैसकेको थियो । मैले रेबिकाको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरें अनि राजको ठाउँमा सुरजलाई । कल्पना गरेँ । कतै सुरजसँग मेरो पनि त्यस्तै बिछोड भएको भए । म त ज्युँदै मँर्थे होला । कल्पना गर्न पनि डर लाग्यो । सुरजको अनुपस्थिति बिनाको जीवन कहाली लाग्यो । रङ्गहिन जीवनको सतहमा म एकछिन पनि उभिन नसक्ने थिएँ ।
हाम्रो पनि त डेढ वर्ष लामो लभ अफेयर पनि यही अनलाइन प्रेमबाट नै शुरु भएको थियो । हाम्रो दिनहुँको च्याटले नै हामीलाई यति नजिक ल्याको थियो कि हामी एक अर्का बिना एकपल पनि बाँच्न नसक्ने भएका थियौं । सायद सुरजको बेईमानी राजलाई उछिन्ने अस्त्र बनेको भए म आज यतिखेर सुरजलाई यसरी सम्झिराखेकी हुन्न थिएँ होला ।
अहो ! मुटु कसरी काँप्दै थियो परिकल्पनाले मात्रै पनि । उसको अनलाइन विवाह गर्ने प्रस्ताब, अनि मेरो सहमतिले गरेको कोर्टम्यारिज । यी सब कुराको अहिले कुनै अहिमियत रहन्न थियो होला यदि राजकै बाटो सुरजले अपनाएको भए । यस मानेमा म भाग्यमानी रहेछु । अझ भन्नु पर्दा मैले रोजेको व्यक्ति गलत परेनछ । जति म इमान्दार थिएँ उति नै सुरज पनि ।
प्रेममा विश्वासको डोरी बलियो हुनु जरुरी हुन्छ । अझ गाँठो बलियो भयो भने कहिले चुडिदैंन । यस्तै मायाको बलियो डोरीमा हामी बाँधिका थियौ । अब मलाई सुरजप्रति असीम माया, स्नेह पलाएर आयो । किन किन मलाई सुरजको उपस्थितिको मीठो सपना देख्ने अनौठो रहर जागेर आएको थियो त्यसैले म छिट्टोभन्दा छिट्टो निद्रादेवीको काखमा लुट्पुटिन हतारिएँ । सुरजलाई सम्झदै न्यानो सिरकभित्रबाट दलिन गन्न थालें ।
5 thoughts on “अनलाइन प्रेम”
kbs December 19, 2011 at 3:32 pm
“याहु, स्काईप, फेसबुक, मझेरी या अन्य कुनै? कुन खोलौं मन घुम्यो । …”
मझेरीलाई पनि उल्लेख गरिदिनुभएछ । धन्यवाद छ । मझेरीको नियमित पाठक – “म” पात्र – पनि कृतज्ञताको पात्र छिन् है! 🙂
अतिथि December 20, 2011 at 12:57 pm
किन किन मीठो लाग्छ मझेरिको सुगन्ध।
धन्यवाद सर प्रतिकृयाको लागि।वास्तवमै भन्नु पर्दा म मझेरीको नियमित पाठक हुँ र हरेक पटक अनलाईमा बस्दा म मझेरीको सयर गर्छु।किन किन मीठो लाग्छ मझेरिको सुगन्ध।
purna chhiring lopchan August 15, 2012 at 6:24 pm
bina g sahi lagyo tapaaiko yo
bina g sahi lagyo tapaaiko yo katha .ani thanks dina chahanchhu majheri.com laai kinaki yo samajiksanjaal bata yasto ramro ramro kathaharu padne maauka dinu bhayekoma.
अतिथि August 16, 2012 at 3:08 pm
धन्यवाद हजुरलाई पूर्ण जी
धन्यवाद हजुरलाई पूर्ण जी यति सुन्दर शब्दहरुमा प्रतिकृया दिनुभएकोमा।
अतिथि December 31, 2012 at 12:17 pm
tapaika srijana haru padhna
tapaika srijana haru padhna ramailo lagcha…. 2013 ko shubhakamana